Cold Storage နှင့် သွားမည့်ကားများအတွက်သတင်းကောင်း Good news for Vehicles with Cold Storage
Import/Export တွင် Change Vehicle နှင့်သွားသောကားများ မှာ Cold Storage ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာပါက ၂၄နာရီ နှင့်ကားထွက်ရန်မလုံလောက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းမျာ...
Vehicles that are in the Change Vehicle in Import / Export are loaded with Cold Storage for 24 hours and inadequate goods to exit. Allow3Days and R...
BCF-> Import-> Other ရဲ့ Clearance လုပ်ခွင့်ရသော Duration ကို အသိပေးစာဖော်ပြပေးခြင်း BCF-> Import-> Other's Clearance ->Notification Duration
BCF-> Import-> Other နှင့် တင်ထားသော Cargo များကို Clearance Button မြင်ရသည့်နေမှစ ၍ ကျန်သည့် ရက်၊ မိနစ်တို့ကို သတိပေးစာ(အနီရောင်)နှင့်ပြထားပါမည်ဖြစ်က...
BCF-> Import-> Other Cargo ships with the Clearance Button from the date it appears. The minutes are displayed withawarning message (Red). Eg. 2...
Arrival Location Panel တွင် BCF နှင့် OSSC တို့တွက် Cargo Report များကို ထည့်သွင်းခြင်း Add Cargo Reports to BCF and OSSC in the Arrival Location Panel
Add New Commodity လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Save & Next Button ထည့်ခြင်း Add Save & Next Button during the Add New Commodity process
OSSC-Import -> HScode_Balance တွင် QRCode နှင့်ရှာ၍ Balance ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်း OSSC-Import -> Good news that you can search for QRCode and balance at HScode_Balance
BCF - IMPORT အပိုင်း Other နှင့်Cargo ထည့်သွင်းခြင်းပုံစံအတွက် သတင်း VEHICLE AND CARGO CHECKING SYSTEM INFORMATION
BCF / OSSC
VCCS-Import , Cargo Registrationအတွက် အသုံးပြုရန် HS Code အကြောင်းသိချင်ပါသည်။ HS Code Pdf file ရနိုင်ပါသလား?
I'd like to know more about HS Code.
HS Code အကြောင်းသိချင်လျှင် Home Page -> Footer ->Useful Link အောက် မှ Customs Tariff Of Myanmar 2017(HSCode) link မှာ PDF file download ယူလိုရပါသည်။
To learn more about HS Code, go to Home Page -> Footer -> Customs Tariff Of Myanmar 2017 (HSCode) link under PDF Download.
mcdvccs.gov.mm Websiteတွင် COMPANY / ARRIVAL LOCATION (WAREHOUSE) and AGENCY ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း။
How to use VEHICLE & CARGO CHECKING SYSTEM with COMPANY / ARRIVAL LOCATION (WAREHOUSE) and AGENCY?
mcdvccs.gov.mm Website တွင်ရှိသော User Manual ကိုကြည့်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
See the User Manual on mcdvccs.gov.mm.
FOR OSSC-IMPORT->OTHER FOR OSSC-IMPORT->OTHER
Myanmar Customs Officer မှ Other အတွက် Request တင...
The Clearance Button will appear on the Broker Pan...
ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်ငွေများမှန်ကန်စွာရရှိစေရန်အတွက် အကောက်ခွန်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ သေချာစေခြင်းနှင် ့အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရိုးရှင်းစေခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
(The Mission of the Myanmar Customs is to achieve trade Facilitation through Simplification of Customs Procedures, while ensuring Customs Control objectives to maintain proper collection of revenue.)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုချောမွေ့စေရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အကာကွယ်ပေးရေးအတွက် ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပါဝင်သူများနှင့်ပူပေါင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပုံဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
(To Create Customs Service which generates the security and facilitation of international trade, protection of social well-being and trade partnership with stakeholders.)
Vehicle & Crago Checking System (VCCS) ကို mcdvccs.gov.mm Website မှာ 27 Feb 2020 မှ စတင်၍ User များ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။
User Registration အတွက် Security Key ကို တံတား (၂) BCF Import တွင် လာ‌ရောက်လျှောက်ထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း ‌လေးစားစွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Arrival Location, Company, Agency, Agent, Broker, Company Agent နှင့် BCF Agent တို့မှ User Registration ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက BCF Import ဌာနတွင် လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) Phone Number - ၀၉၂၆၆၂၃၂၉၂၅ ကိုလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Vehicle & Crago Checking System (VCCS) Update Information များကို နေ့စဉ် Latest New တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
- Help Desk Phone
(09 266 232 924)
-132, Strand Road
(01 389 879)
Customs Tariff of Myanmar 2017 (HS CODE)
Company User's Registeration
Company User's Login
Agency User's Registeration
Agency User's Login
Arrivallocation User's Registeration
Arrivallocation User's Login
>> Click here for Agent, Broker, Company Agent, BCF Agent Login to BCF Panel
>> Click here for Agent, Broker, Company Agent Login to OSSC Panel
>> Click here for Company Login
>> Click here for Agency Login
>> Click here for Arrivallocation Login
>> Click here for Agent, Broker, Company Agent or Bcf Agent Registration
>> Click here for Company Registration
>> Click here for Agency Registration
>> Click here for Arrivallocation Registration